Kharkiv Petro Vasylenko University Technical National Of Beeraha
si ay u	31	August
Kharkiv Petro Vasylenko National University Technical Beeraha waxaa u dabaal-guuradii 85. KhNTUA waa hay'ad si fiican u yaqaan oo la aqoonsan yahay waxbarashada sare ee heerka aqoonsi 4aad, oo degan meel istaahila ka mid ah jaamacadaha of Kharkiv xarunta waxbarashada sare iyo Ukraine.
All this bilaabay in 1930. dib u habaynta waxbarashada sare oo gaar ah oo bilaabay in dalka ay sabab u tahay yaraanta ba'an khubarada aqoon sare le.
On 12 July Golaha Shacabka ee Commissars of Socialist Yukreeniyaan Soviet Jamhuuriyadda qaraar ku saabsan abuuritaanka tacliinta sare iyo machadyada waxbarashada farsamada sare iyo qabka wareejiyo oo hoos timaad maamulka commissariats dadka ku haboon ee. Qaybta "laan Beeraha" arkayey sameynta Institute of Mechanization iyo Electrification Beeraha ee Kharkiv ka waaxaha mechanization ee machadyada beeraha ee Kharkiv iyo Poltava.
Kharkiv Institute of Mechanization iyo Electrification Beeraha (Khim) bilaabay tababarka Injineerada farsamo takhasusay hagaajinta iyo dayactirka Cagaf iyo mashiinada beeraha.
Dhismaha Machadka beegantay bilowga mashruuc baaxad ee ahaa warshadaynta dalka iyo aasaaskii saarka matoorada awood beeraha. Laakiin dib u habaynta waxbarashada waxaa la siiyaa ma wax loo baahan yahay oo ku salaysan farsamo iyo maaliyadda. All qaladaadkeyga, kuwaas oo sidoo kale saameyn ku KhIMEA. Waxaa jiray yaraanta ba'an ee fasalada, shaqaalaha u qalma, buugaagta, iyo qalabka shaybaarka. in xaaladaha nololeed ee ardayda ahaayeen fog ka fiican iyo sidoo.
Machadka Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Electrical Engineering iyo Computer Technologies
Wasaaraddu waxay of technotronics iyo injineernimada teori.
Wasaaraddu waxay of automatization iyo teknoolajiyada computer dhafan.
Wasaaraddu waxay of automized nidaamyada korontada iyo farsamo.
Wasaaraddu waxay of sahayda tamarta iyo maaraynta awooda.
Wasaaraddu waxay tiknolojiyada korontada isku dhafan iyo geedi socodka.
Machadka Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Systems Mechatronics iyo Maaraynta
Wasaaraddu waxay of Cagaf iyo gaari.
Wasaaraddu waxay of mishiino beeraha.
Wasaaraddu waxay of ayna nidaamka farsamada loo magacaabay ka dib markii T.P. Yevsiukov.
Qaybta tababarka ku ool ah.
Wasaaraddu waxay tayo, jaango'an iyo shahaado.
ddepartment ee badbaadada shaqada.
Wasaaraddu waxay tababarka ciyaaraha jidhka iyo isboortiga.
Machadka Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Ganacsiga iyo Maareynta
Wasaaraddu waxay soo saarka, ganacsiga iyo maamulka ururka.
Wasaaraddu waxay xisaabinta iyo hubinta.
Wasaaraddu waxay Dhaqaalaha iyo Suuq-.
Wasaaraddu waxay of Kibernetics.
Wasaaraddu waxay of UESCO "Philosophy of Human Isgaarsiinta", falsafad iyo taariikhda Ukraine.
Wasaaraddu waxay dhaqanka.
Machadka Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Service Technical
Wasaaraddu waxay dayactir hababka farsamada.
B. waaxda Shabelnyk nidaamyo farsamo iyo teknoolajiyada xoolaha.
Wasaaraddu waxay tiknolojiyada qalabka.
waaxda V.Anilovych ee xoogga mishiino, halaynta iyo adeeg farsamo oo ka mid ah mashiinada.
Qeybta adeegga farsamada mashiinada
The Department of nidaamka injineernimada iyo teknoolajiyada adag kaymaha
The Department of teknoolajiyada gaadiidka iyo saadka
Machadka Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Technologies Cuntada iyo Processing
Xafiiska Dean ee Ardayda Dibadda
Centre of Distance Education iyo Correspondence
Machadka Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Post-Diploma Waxbarashada
The Institute Sayniska Isbeddellada
Admission 2016-2017 furan yahay hadda